Waan necbahay Bloggards | Martech Zone
Waan necbahay Bloggards
Sabti, Agoosto 26, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Seth wuxuu leeyahay a post bartiisa oo i xasuusisay inaan qoro tan.
Waan jeclahay blogging. Laakiin waan necbahay bloggards. Waa erey cusub oo aan qalinka ugu duugay dadka wax qora iyo kuwa caajiska badan ee blog-ka - laakiin waxay si fudud u dib u cusboonaysiin lahaayeen baloog kale, mararka qaarkoodna eray ahaan eray. Waa caajis waana wax xatooyo badan maadaama hits laga yaabo inay kaliya ku sameyso boggooda halkii blogger asal ah. Hadda, haddii aad hayso bayaan ka soo horjeedda ama taageeraya oo aad rabto inaad ku darto wadahadalka - taasi waa waxa loogu talagalay Blogging! Taasi waa wadahadalka barta-bogga.
Way ku fududahay blogger inuu isku dayo inuu la mid noqdo kuwa wax qora oo kale, sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo la heli karo. Iska caabi! - Seth Godin
Heerka ku xigaa wuu ka hooseeyaa kan bloggards waa isu geeyayaasha. Kuwani waa bogag si fudud u xoqa waxyaabahaaga oo ku dhejiya boggooda. Kuwani scum-nuugayaashu waa wax lagu qoslo. Waxaan u maleynayaa inaysan waxba ka yareyn xatooyo. Hubaal - waxay leeyihiin xiriirin ay dib ugu soo celiyaan boggaaga aad dirtay, laakiin waxay horeyba lacag uga heleen mawduucaaga. Taasi waa xatooyo, cad oo fudud.
Haddii dadweynow aad taqaanno sida aan ula dagaallami karno tan, fadlan ka faallo arrintan. Waxaan rabaa inay joogsato!
update: Copyblogger wuxuu aqoonsaday Bloggard. Tani waxay ahayd qalad habka gudbinta sida ku xusan goobta Telegraph.
update: Ajay D'Souza ayaa la xaday
Tags: Content Suuqcopyrightdaweynta waxyaabahaxaday waxyaabahaqaadashada nuxurka
Farshaxan-yar-yar oo Fudud: Dadka Dufan Lama oggola
Agoosto 26, 2006 saacaddu markay ahayd 6:44 PM
Waa inaad ku cusbooneysiisaa qoraalkan waqtiga ku habboon tusaale dhow. Waxaan ula jeedaa imisa jeer ayuu wargeys qabsadaa isagoo xoqaya blogger?
Agoosto 26, 2006 saacaddu markay ahayd 6:52 PM
Bloggards, waa inaan xasuustaa taas.
Wax badan ayaan kala macaamilaa arrimaha xuquuqda lahaanshaha iyo xatooyada waxyaabaha ku jira adduunyada wax lagu qoro, hadda waa mid ka mid ah meelaha koowaad ee diiradda la saarayo.
Laakiin waa adduun yaab leh. Qeyb wadaag iyo dib-u-habayn ayaa la filayaa laakiin haddii qofku aanu asal ku darin, badiyaa qaylo ayaa jirta. Mid ayaa laga filayaa inuu dhiso, ma ahan oo keliya inuu ku celiyo.
Dabeecadda, dabcan, had iyo jeer waa shuruud.
Taasi waa uun qorshaha aan arkayo. Xor ayaad u tahay inaad diido.
Agoosto 26, 2006 saacaddu markay ahayd 7:07 PM
Jonathan, waan oggolahay 100%!
Agoosto 27, 2006 saacaddu markay ahayd 5:38 PM
Ma garanayo sida ay suurtogal u tahay in lala dagaallamo dadka wax qora iyo kuwa wax ururiya.
Isku-darka isku-darka waa la joojin karaa haddii aad isticmaasho .htaccess. Si kastaba ha noqotee, kuwani waxay u baahan yihiin in loo sameeyo hal ururiye kasta.
bloggards, waan ka shakisanahay, si fudud sababtoo ah waa bini aadam caajis ah oo aan ixtiraam u xadin waxyaabaha dadka kale! X (
Sep 2, 2006 at 11: 34 PM
Ninyahow, qoraal kale oo weyn 😀
Dhawaan, waxaan helay degel si aad ah u koobiyeynaysa qoraallada 'Problogger.net' eray ahaan eray ahaan. Kadib markaan soo noqday, wuu wada tirtiri lahaa, isagoo ka cudurdaaranaya adeegsiga isku-darka quudiyaha - ka dibna wuxuu dib ugu noqday inuu nuqulo bogagga kale mar kale! Baastarayaal qashin ah = (
7, 2006 at 11: 49 PM
Waxaad dhahdaa, "Waa erey cusub oo aan qalinka ku duugay ..."
Laakiin, hoog, maya!
'Bloggard' waa astaan ​​astaan ​​u ah Arthur Cronos, oo la adeegsanayay sannado badan. Wixii "asalka ahaa", "dhabta ah", iyo * kaliya * Adventures of Bloggard, booqo bloggard.com oo hel tooska qaadashada.
Hadana sheegashooyinkan aad sameysay, waa maxay, waa inay noqdaan aflagaado xun, xanaaqyo goos goos ah, iyo been abuur been abuur ah, shaki kuma jiro. Laakiin waan hubaa inaad si wanaagsan ugula jeedday.
7, 2006 at 11: 55 PM
Waxaan ugala jeeday sida ugufiican, Arthur! Aad ayaan ugu faraxsanahay in:
1. Ereygu weligiis ma tagin uumis buuxa!
2. Aad baad ugu fiicantahay astaanta ganacsigaaga!
Haddii aad tahay Bloggard rasmiga ah, waxaan kuu xaqiijin karaa inaanan ku necbahay!
PS: Halkee ayaan ka heli karaa fiidiyow qof ka ciyaara Mobius Megatar?
Oktoobar 28, 2007 at 4:21 AM
Waa hagaag markaa isku-duwayaasha balooggu waa inay ahaadaan… (durbaan duudduuban) bloggators (rashka, pandemonium, fade deg deg ah)!
Hmmm, kaliya toddobo farriimood oo loogu talagalay bloggator, ma xuma, ma xuma, helitaanka ballaadhin asal ah